बलिउड / हलिउड Archives - Page 38 of 41 - Purbeli News
बलिउड नायिका उर्बसी नेपाल अाउदै
काठमाडौं । पछिल्लो समय बलिउडका कलाकारहरुको नेपाल आगमन बढ्दो छ । यसै क्रममा बलिउड अभिनेत्री उर्बसी रौटेला यही असोज १४ गते बिहान काठमाडौं आउँदैछिन् ।युहान इन्टरनेशनल इभेन्टस्को निम्तामा उनी दुई दिनका लागि काठमाडौं आउन लागेकी हुन् । युहान इन्टरनेशनल इभेन्टसले सोही दिन बेलुकी पख ‘मोडल क्वेस्ट इन्टर नेशलन नेपाल, सिजन–२’ आयोजना गर्दैछ । राजधानीका त्रिपु...
अन्त्य भयो ब्राड पिट र एन्जेलिनाको प्रेम, सेक्स र मिष्ट्री कहानी
एजेन्सी । १ दशक भन्दा बढी सम्बन्धमा रहेका हलिउड जोडि ब्राड पिट र एन्जेलिना जोली अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।जोलीले आफ्ना पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेदको माग गर्दै मंगलबार अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि हलिउडको आइडियल कपल मानिने यो जोडी छुट्टिन निश्चित भएको हो । ब्राड र एन्जोलिना छुट्टिने समाचारले मंगलबार राति ट्विटरमा हंगामा भयो । ‘...
संवेदनशिल अगं नै देखिनेगरि आलियाले लगाएको पारदर्शी कपडाले मच्चायो हंगामा
एजेन्सी । बलीउड नायिकाहरु पछिल्लो समय ड्रेसअपमा थप उदार देखिन थालेका छन् । हलिउडको ठाडो प्रभाव क्रमिक रुपमा बलिउडका कलाकारहरु पनि देखिँदै जान थालेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छिन् नायिका आलिया भट्ट । कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सबैको ध्यान खिचन नायिकाहरुले पारदर्शी कपडा लगाउने गरेका छन् । त्यही सुत्रलाई आलीयाले पनि आत्मसाथ गरेकी छिन् । जुन पो...
कपिल र इरफानलाई तीन वर्ष जेल!
एजेन्सी। मुम्बईको बृह्नमुम्बई म्युनिसिपल करपोरेशन (बीएमसी) ले कपिल शर्मा र इरफान खान विरुद्ध अवैध निर्माणको मुद्दा दर्ता गरेको छ। इस्ट गोरेगाउमा यी दुवैको घर छ। त्यहाँको फ्याटको निर्माणमा दुवैले फेरबदल गरेको आरोप लागेको छ। यदि आरोप सावित भए कपिल र इरफान लाई तीन वर्षको जेल हुन सक्ने छ। कपिल वर्सोवामा भएको आफ्नो अफिसलाई लिएर पनि विवादमा छन्। केही ...
प्रियंकाले खिचाइन अहिलेसम्मकै बोल्ड तस्विर
बलिउडकी चर्चित नायीका प्रियंका चोपराले एक म्यागेजिनका लागि निकै बोल्ड तस्विर खिचाएकी छिन्। जिक्यु म्यागेजिनका लागि उनले खिचाएका तस्विरहरु यतिखेर सामजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छन्। बलिउडबाट हलिउड तिर पाइल टेकेकी प्रियंका यतिखेर अमरिकामा ‘क्वान्टिको’ नामक अंग्रेजी सिरिजको दोस्रो सिजनको शुटिङमा व्यवस्त छिन्।यसका साथै एक बलिउड चलचित्रमा उनी नेग...
यसकारण हुँदैछ सलामानको विवाह १८ नोभेम्बरमा!
सलमान खानको जति विवाहको चर्चा सायदै अन्य कसैको होला। ५० वर्ष कटेका यी नायक अहिले रोमानियाकी मोडल यूलियां भन्तुरसंग डेटमा छन्। पछिल्लो केही समय देखि यहि नोभेम्बरमा १८ मा सलमानको विवाह हुने चर्चा निकै छ। सलमानको विवाह नोभेम्बरमै हुनेमा अर्को एक कुराले भुमिका खेल्ने भएको छ। सलमानकी गर्लफ्रेन्ड यूलियाको भिसा नोभेम्बरमा एक्पायर हुनेवाला छ। भिसा सकिए उन...
बुहारीको भिडियो हेरेर ससुरा अमिताभ बच्चनको पसिना छुट्यो …
करन जोहरको अपकमिङ फिल्म ‘ए दिल हे मुस्किल’को पहिलो टिजर भिडियो रिलिज भएसंगै बलिउडमा नयाँ तरंग आएको छ। तरंग यसकारणकी पहिलो पटक विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या रायलाई यस्तो स्टिमी सिनमा देखिने भएको छ। टिजरमा देखाइएको रणवीर कपूरसंगको इन्टिमेट सिनको बढी चर्चा चलेको छ। फिल्ममा अनुष्का शर्मालाई पनि देख्न सकिनेछ। तर चर्चा सबै ऐश्वर्याकै छ।बुहारीको फिल्ममा इन्टिमे...
यी हुन् संसारकै सर्वाधिक कमाउने १० हिरोइन, दिपिका १० औं नम्बरमा
न्युयोर्क / फोर्ब्स म्यागेजिनले संसारका सबैभन्दा बढी कमाउने हिरोइनहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बलिउडकी सुन्दरी नायिका दिपिका पादुकोण टपटेनमा अटाउन सफल भएकी छिन् । उक्त सूचीमा नाम पर्ने उनी बलिउडकी एक्ली नायिका पनि हुन् । उनको कमाइ १० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यस्तै चिनियाँ अभिनेत्री फ्याङ विङविङ पनि विश्वका सर्वाधिक कमाउने नायिकाको सूच...
कैटरिनाले विकिनी पहिरिदा किन रिसाए सलमान ?
मुम्बर्इ / ‘बार बार देखो’ कैटरिनाको चाडै रिलिज हुन लागेको फिल्मको नाम हो । यसमा उनले युवा स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रासँग काम गरेकी छिन् । निर्माण पक्षले फिल्मको प्रोमो र गीत अहिले सार्वजनिक गरिरहेको छ । धेरै सिनहरुमा कैटरिना बिकीनी पहिरिएको अवस्थामा देखिइरहेकी छिन् । कैटरिनाको यो बोल्ड अवतारबाट मानिसहरु चकित भइरहेको छ । भलैं, विकिनी पहिरिनु अहिल...